Daafaca dambeedka bidix uga dheela Los Blancos ee Marcelo ayaa la bedalay qeybtii hore ee ciyaarta dhaawac gaara. - damqo
Tuesday 12 December 2018 / 15:59
Daafaca dambeedka bidix uga dheela Los Blancos ee Marcelo ayaa la bedalay qeybtii hore ee ciyaartii ay xalay 5-3 ay dharbaaxeen dhigooda Real Betis, taasoo ka tirsaneed horyaalka La Liga, ee dalka Spain.
Goolasha waxay uga mahdinaysaa Real Madrid ciyaartoydeeda kala ah: Marcos Asensio oo labo jeer shabaqa gaaray, Ronaldo, Sergio Ramos iyo Karim Benzema oo markii uu bedal kusoo galay ciyaarta shabaqa gaaray islamarkiiba.
Marka laga soo tago farxadda, guushan, hadana Real Madrid, ayaa warka xun ee usoo yeeraya wuxuu yahay inuu dhaawac umuuqda mid dhanka Muruqa ah uu soo gaaray daafacooda
muhiim ah ee Marcelo.
Dhaawacaan oo aanan wali la ogeyn intauu gaarsiisan yahay ayaa wuxuu kusoo aadayaa ka hor 15 maalmood lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League, kaasoo ay dib ugu laaban doonan Paris Saint-Germain.